Puntland waxay ku soo ururi doonta Garoowe, Bosaaso lama yaqaan cid haysata. | WARARKA PUNTLAND
Home Maqaal Puntland waxay ku soo ururi doonta Garoowe, Bosaaso lama yaqaan cid...
Maamulka puntland oo cadaalad darro iyo dulmi la ciir ciiraya ayaa faraha ka sii baxaya amaanka, qaar ka mid ah magaalooyinka waa weyn ee Puntland sida xarunta ganacsiga ee Boosaso oo masuuliyiin kala duwan lagu qaarajiyey dhawaan.
Waxaa ku hardamaya Puntland kooxo isku heyb u badan oo gaadiid iyo ciidan qabiileedyo haysta iyo kooxo ka soo horjeeda ayaa ku herdamaya Puntand, fiidka dheer ayaa laga yaaca oo guryaha lagu xarooda maalmahan.
Kooxaha aaminsan inay u dagaalamayaan khilaafada islaamiga ah ee Somaaliya oo saldhigii Qandala dhawaan laga saaray iyo kooxaha Al-shabaab ee buuraleeyda galgala waxay labada dhinac kaga abuureen magaalada Bosaaso khatar amaan darro, waxayna dowladda ku gelisay qalqal siyaasadeed iyo mid nabadgalyo xumo, taasoo xataa dadkii shacabka ku riday cabsi weyn oo soo wajahda dadweyanaha Bosaaso.
Ciidamada amaanka Bosaaso ee Booliiska aan mushaharka iyo gunada qaadan ayaa xalay ilaa maanta aruurinayey dad shacab ah oo u badan dhalinyaro magaaalada degan. Iyagoo aan u meel dayen qof kasta oo maraya ama fadhiya biibitooyinka lagu caweeyo iyo meelaha qaadka lagu cuno.
Maanta markii la soo aasay maamulihii madaxtooyada Bosaaso Aadan gaas ayaa ciidamadii madaxyooyada ee ka soo laabtay aaska waxay toogasho ku dileen nin maskiin ah oo booyad biyaha dhaamisa watay, kadib markii isagoo soo dhaansaday booyada gaari cabdi Bile nooca loo yaqaan isku horgooyey oo inta dhinaca kala soo mareen madaxa xabad kaga dhufteen wadihii booyada ciidankii watay gadiidka qoriga saran yahay.
Ninka booyada watay ayaa ahaa aabe u soo shaqo tegay caruur yaryar oo biilka uu uga raadin jiray booyada uu la kalaho aroortii si uu biyaha ugu soo dhaamiyo magaalada bvoosaaso xaafadaha biyaha baraakta loogu dhaamiyo.
Dhibaatada ayaa sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa waxaana jira waxyaabo badan oo dhacaya madaxda dowladda puntland loo xilsaaray amaanka siyaasadda iyo dhamaan golayaasha dowladda ayaa mooda kuwo isku mid ah oo mid mid dhaama aan lagu arag, marka ay timaado ka hadalka iyo wax ka qabashada cadaalada iyio dulmiga la isku geysanayo. Dilalka xisaab la’aanta ah xukumada aan sababta laheyn iyo isku xadgudubka bulshooyinka wada nool waa sababaha sii murginaya arrimaha dhibaatada amaanka guud ee Puntland.
This post has already been read 103524
Previous articleDaawo Sawirada Mas’uuliyiin ka tirsan Golaha Xukuumadda Oo Ka Qayb Galay Aas Loo Sameeyay Agaasimihi Madaxtooyda Boosaaso
Next article(Sawirro) Ilhaan Cumar Iyo Seygeeda Oo Lagu Soo Dhaweeyay Magaalada Gaalkacyo